ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချစ်ဆုံးလား … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချစ်ဆုံးလား …
Posted by မမလေး on May 9, 2011 in Creative Writing | 16 comments
စဉ်းစားမိတာလေးကို မေးပါမယ် … စဉ်းစားပြီး ဖြေကြည့်ကြည့်ပါနော် ….
၁ * အားလုံး Saw ကို ကြည့်ဖူးမှာပါ ။ အဲ့ဒီထဲကလို ကိုယ့်ရဲ့ အဖေ ၊ အမေ ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ တူတူ ကိုယ်ကိုလည်း ချုပ်ထားပါတယ် ဆိုပါစို့ ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို ခလုတ် တစ်ခုစီပေးထားမယ် ။ တစ်ယောက်ပဲနှိပ်ခွင့်ရှိတယ် ။ နှိပ်လိုက်ရင် မျက်စိကန်းမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးနှိပ်လိုက်သူက သင်ဖြစ်နိုင်ပါသလား ။
၂ * တစ်အိမ်လုံးကလူတွေရော ကိုယ်ရောဗိုက်အရမ်းစာနေကြတယ် …်ဒါပေမယ့် စားစရာက မုန့်က တစ်ခုပဲရှိတယ်မစားရရင်သေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီမုန့်ကို စားသူဟာ ကိုယ်လား … ???
၃ * ညဘက် မြေငလျင်လှုပ်လို့ဆိုပြီး လမ်းပေါ်မှာ ထွက်နေရတယ် ။ တစ်အိမ်လုံး ရော တစ်ခြားလူတွေရောပေါ့ … မိုးတွေလည်း သည်းသည်းမဲမဲရွာလို့ ။။။ လေတွေလည်း အရမ်းတိုင်နေတယ် ။။။ ထီးတစ်ချောင်းတော့ပါတယ် ။ ။ အိမ်ကို မပြန်ရသေးဘူး အခြေအနေတစ်နာရီလောက်အောက်မှာစောင့်ရမယ်တဲ့ … အဲ့လိုဆိုရင် ထီးကို ဘယ်သူ့ကိုပေးဆောင်းမှာလဲ …
အဲ့လို ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချစ်ဆုံးလား ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံး ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် အတွေ့အကြုံတွေ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တချို့လူတွေအဖို့မှာတော့ ခံယူချက်တွေ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ အခြားသောတန်ဘိုးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာကို ဖုံးကွယ်လိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒီ post လေးကို သဘောကျပေမယ့် ဒီပေတံလေး သုံးချောင်းနဲ့တော့ အချစ်ဆုံးဟုတ် မဟုတ်တိုင်းတာဘို့ မလုံလောက်သေးဘူးထင်ပါရဲ့။
၄ * အမေ့ စကား နဲ့ မိန်းမစကားဆို ဘယ်သူ့စကားကို နားထောင်မှာလဲ …
၅ * အမေ နဲ့ မိန်းမ နဲ့ ဆိုဘယ်သူ့ကို ရွေးမှာလဲ ။။။
အမေ ထက် မိန်းမကို ရွေးချယ်သူကို တွေ့ဖူးလို့ မေးလိုက်တာပါ ။။။
လူတွေက ဒုတ်ခရောက်နေတဲ့ အချိန်ကြမှ အချစ်ဆိုတာ ပိုပြီး သိတတ်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ တစ်ချို့က သေလောက်အောင်ချစ်ပါတယ် ဆိုပြီး တစ်ကယ့် ဒုတ်ခရောက်ရင် ကိုယ်လွတ်အရင်ရုန်းကြတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုချစ်လို့ပေါ့ … ပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အချစ်ဆုံးလား ဆိုတာ မိသားစု အတွက် ကိုယ်က အနစ်နာခံနိုင်လား ၊ ကိုယ်လွတ်အရင် ရုန်းမှာလား လို့ပြောချင်တာပါ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ကို ကိုကိုအောင် …
၁- ကျန်တဲ့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံး လွတ်မြောက်သွားမှာလား။ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကခလုတ်နှိပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့။ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေဆိုတာကို အပထား မိဘတွေအတွက်ပေါ့။ိကိုယ်ကအနစ်နာခံပေမဲ့ ကျန်တဲ့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးမလွတ်မြောက်နိုင်ရင် အလကားပဲလေ ၂- တအိမ်လုံကလူတွေမှာ ကိုယ့်မိဘပါလား။ ကိုယ့်သားသမီးပါလား ။ တခြားစိမ်းတဲ့သူတွေပါလား။(ဥပမာ…ယောင်းမတို့၊ခဲအို တို့ပေါ့) မိဘဖြစ်စေ၊သားသမီးဖြစ်စေ တစ်ယောက်ယောက်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်မစားဘူး။ တစ်စိမ်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ပြောချင်တဲ့သဘောတရားလေးကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တာနဲ့ တခြားလူကိုချစ်တာဟာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာပါဘဲ
ပုစ္ဆာအဖြေထွက်အောင် တကယ်တွက်ကြည့်မှ သိမှာပေ့ါ။ တကယ်အရေးကြုံလာမှပဲ တကယ့်စိတ်ခံစားချက်ဟာ ပေါ်လာမှာပါ။ အရေးမကြုံခင် ကြိုတင်တွေးဆထားတာတွေနဲ့ တကယ်ဖြစ်ပျက်လာတာတွေနဲ့ ကွာခြားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လို အဖြေထွက်မယ်ဆိုတာ မသိနိုင်သေးဘူး။
ဒါတွေက ပုံသေကားချပ်ပြောလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ဘာလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ်။ မိသားစုအတွက် ငဲ့ညှာနေတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်ကော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မချစ်ဘူးလို့ ဆိုလိုလို့မရပြန်ပါဘူး။ ဒါတွေက သဘောအကြမ်းဖျင်း အပေါ်ယံတွေလို့ မြင်မိပါတယ်။ ဖြန့်ဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်။ တကယ် အရေးကြုံလာရင် ဒါတွေ ကြည့်နေဖို့ အချိန်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ငဲ့ညှာတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေ လူတိုင်းမှာ ကိန်းအောင်းနေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
လူတိုင်းကတော့ ယေဘုယျပြောရရင် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အချစ်ဆုံးပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ အနစ် နာခံတတ်တဲ့ သူတပါးကို ဦးစားပေးတတ်တဲ့ ညာဉ်လေးတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိန်းအောင်းနေကြမှာပါ။ နေခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သွန်သင်ဆုံးမမှု မျိုရိုးဗီဇ စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး အနဲအများတော့ ကွာကြတာပေါ့။ တိုက်တန်းနစ်ကားထဲမှာ ကြည့်ပါလား မင်းသားက မင်းသမီးကို အသက်စွန့်ပြီးကယ်ခဲ့တာ ။ သစ်သားပြားလေးတစ်ပြားပဲ ရှိတာကို မင်းသမီးကို တင်ပြီးသူကတော့ အသေခံခဲ့တယ်။ ဒီလိုပါပဲ လူတိုင်းမှာ အတ္တ ၊ ပရ မျှတပြီးရှိကြမှာပါ။ ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်သိပြီး သူတပါးအတွက် မစဉ်းစားတတ်တဲ့ လူကိုတော့ လူလို့တောင်မခေါ်နိုင်ပါဘူးလေ။။
ပုံသေ ကားချပ်တော့ တွက်လို့မရနိုင်ပါဘူး… အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံး ဆိုတာက များပါတယ်….
မိန်းမနဲ့ အမေဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကို ဦးစားပေးရမလဲ ဘယ်သူ့စကားနားထောင်မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ အကြောင်းအရာ ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အမေ နဲ့ မိန်းမ ဆိုတာမတူတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိကြတဲ့ သူတွေပါ။ အမေဆိုတာ ရိုသေလေးစားပြုစုလုပ်ကျွေးရမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ မိန်းမ ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့လက်တွဲဖော် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ တခြမ်း။ သားသမီး ၀တ္တရား နဲ့ လင်ဝတ္တရား လဲ မတူဘူးလေ။ ဆိုတော့ မတူတာနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးလေ။ ယောက်ျားသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ဘယ်သူ့စကားနားထောင်ရမလဲ လို့ စဥ်းစားနေစရာမလိုဘဲ ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေး စဥ်းစား ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်….ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုပဲရှိတော့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုရင်တော့ မိဘဟာ ဦးစားပေးရမဲ့ နေရာမှာရှိပါတယ်။ ဒါကိုလဲ ဇနီးမယားတိုင်းနားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ထင်တာပြောကြည့်တာပါ။ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲလို့ရပါတယ်။။။
– လှူတာဘယ်သူ့အတွက်လည်း.. သူရသွားဖို့(သူလိုအပ်တာကို ဖြည့်ဖို့)လှူတာလား..။ ကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့လှူတာလား..။
– ငတ်နေပြတ်နေတဲ့ကလေးတွေ..လိုအပ်နေတဲ့လူတွေမလှူပဲ ..ဘုရားကျောင်းကန်တွေ…နာမယ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေလှူတာ ဘယ်သူရဖို့လည်း..။
ဒို့ရွာ ဒို့မြေ ဒို့ရွာ ပြည်ဝယ် စေတီစပါး များလည်း များ၏
များပါလေလည်း တမွဲမွဲနှင့် ဆင်းရဲကာကာ ကာလကြာလျှင် … ပဲဖြစ်နေကြမှာပဲ..။
ဒို့မြန်မာတွေ.. အရမ်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ကြတယ်လေ…။
ငါရဖို့..။ ငါနောက်ဘ၀ကောင်းဖို့..။ ငါကုသိုလ်ရဖို့..။ ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့… ငါ..ငါ..ငါ…
အဲ ဒီ အဖြေအတွက် “အာဇာနည်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို ချက်ကို အရင် ဖွင့်ပေးပါ။
လှူတယ်ဆိုတာကိုယ်သဒ္ဒါပေါက်တဲ့နေရာမှာလှူတာအကျိုးများပါတယ်၊ အနောက်တိုင်းကလူတွေလှူတာ ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမသိပဲ ငတ်နေပြတ်နေတဲ့ကလေးတွေ..လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာစေလိုသောစေတနာနဲ့ လှူတာဆိုတော့ ပါရမီမြောက်လှူဒါန်းခြင်းပါပဲ။တကယ်အကျိုးများပါတယ်။
အဲဒီနည်းဟာ ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်သိပြီး လှူနည်းနဲ့တပုံစံတည်းပါပဲ။
သားကောင်းဖြစ်ချင်ရင် လင်ကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ လင်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင် သားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေနဲ့ မိန်းမက စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝကြလို့ (သို့) သားဖြစ်သူအနေနဲ့ရော၊ လင်ဖြစ်သူအနေနဲ့ပါ ကြားကနေ မျှတအောင် စီမံတတ်ပြီး (သူ့နေရာနဲ့သူ စီစဉ်တတ်ရင်) လင်ကောင်းရော၊ သားကောင်းပါ ဖြစ်အောင်နေသွားတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။
သေချာတာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ် ကမ္ဘာမီးလောင်သားတောင်ချနင်းမတဲ့.။အင်းလူတွေဟာအတ္တသမားတွေပါ။တခါတလေ ကိုယ်ကြိုးစွန့်တတ်ကြပေမယ့်ဘာမဟုတ်တာနဲ့ အတ္တတွေမောဟတွေ ကြီးနေတတ်တယ်။ဒီပေတံလေးသုံးချောင်းနဲ့ တိုင်းတာဖို့ မလုံလောက်ပါဘူး။